Tifatiraha sawirka ugufiican ee bilaashka ah ee PC si uu ugu shaqeeyo hal abuur | Abuurista khadka tooska ah
Horaa loo yiri sawirku wuxuu u dhigmaa kun eray. Si kastaba ha noqotee, xilligan aan ku nool nahay, tani way ka sii muhiimsan tahay, maadaama maalmahan waraaqaha ay yihiin waxa aan ugu yar isticmaalno, waxaana inagu hagaya muuqaal ahaan marka loo eego qoraalka. Sababtaas awgeed, haysashada sawirro wanaagsan iyo tifaftiraha sawir-gacmeedka bilaashka ah ee ugu fiican ee PC-ga, shaki la'aan, waa aaladda aan u baahan nahay si aan ugu wanaagsan uga soo baxno sawirkaas.
Laakiin, Ma jiraan tafatirayaal sawir wanaagsan oo bilaash ah? Mise kuwa la bixiyay ayaa ugu fiican? Maanta waxaan rabnaa inaan kaala hadalno waxa ku saabsan Ikhtiyaarrada waa inaad ka heshaa tifaftiraha sawirka bilaashka ah ee kombuyuutarka. Sidaa darteed, sawir kasta oo aad sameyso waa la tafatiri karaa si loo gaaro natiijada aad rabto.
1 Barnaamijyada doonaya inay noqdaan tifaftiraha sawir-gacmeedka bilaashka ah ee kombuyuutarka
1.1 Tifatiraha sawir qaata ee ugufiican PC: GIMP
1.4 Sawirada Pos Pro
1.6 Barnaamijyada kale ee loo tixgelinayo inay yihiin tifaftiraha sawir-gacmeedka bilaashka ah ee kombuyuutarka
Barnaamijyada doonaya inay noqdaan tifaftiraha sawir-gacmeedka bilaashka ah ee kombuyuutarka
Mid ka mid ah khaladaadka aad sameyn karto markii aad sawir qaadaneysid ama aad sawir qaadaneysid ma ahan inaad tafatirto. Tusaale ahaan, qiyaasi inaad u baahan tahay dabool buug. Waxaad aadeysaa bangiga sawirada waxaadna heleysaa mid aad jeceshahay, markaa waad soo dejineysaa, ama waad iibsaneysaa waana intaas, waxba ma qabanaysid aan ka ahayn inaad cinwaanka buugga dhigto oo aad ka saarto.
Si kastaba ha noqotee, ma ogtahay in tani ay tahay qalad weyn? Hagaag haa, maxaa yeelay sawirkaas aad iibsatay ama aad soo degsatay, wuxuu yeelan karaa tayo wanaagsan iyo saameyn ka sii guuleysata, haddii ay ahaan lahayd in la maro tafatiraha sawir marka hore. Hagaajinta dhalaalka, isbarbar dhiga, dhigida lakab diiran ama xitaa sifiican u iftiiminaya faahfaahinta sawirka waxay ka dhigi kartaa inay gebi ahaanba is bedesho iyo, laga bilaabo inaan la dareemin si loo qabsado dareenka qofkii arka inuu jiro farqi weyn.
Si kastaba ha ahaatee, Waxaan fahamsanahay inaad marwalba ka fikirtay in tifaftiraha sawirka ugu fiican ee PC uusan ahayn kan ay bilaash ku siinayaan, laakiin waa inaad lacag bixisaa. Dhibaatadu waxay tahay inaad khaldan tahay. Maanta waxaa jira barnaamijyo badan oo loo qaadan karo tifaftiraha sawirka ugu fiican ee bilaashka ah ee kombuyuutarka. Si kale haddii loo dhigo, maahan in wax kasta oo tayada siiya la iibsado; mararka qaarkood waa ku filan tahay inaad si fiican u raadiso xulashooyinka aad suuqa ku haysato.
Markaad ka hadasho xulashooyinkaas, barnaamijyada aad tixgelin karto waa kuwan soo socda:
Tifatiraha sawir qaata ee ugufiican PC: GIMP
GIMP waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay tifaftiraha sawirka ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee kombuyuutarka, laakiin waa barnaamij kuu sababi kara adiga labo falcelin: dhinac ah, xanaaq la'aan, maxaa yeelay way adag tahay in, haddii aadan waqtigaaga qaadan, ay ku ciriiri karto maxaa yeelay way adag tahay in la maareeyo., gaar ahaan bilowga; dhanka kale, farxad, maxaa yeelay waxaad haysataa qalab bilaash ah oo awood u leh la macaamilidda barnaamij caan ah oo lacag lagu bixiyo, sida Photoshop.
Waa sidaas GIMP waxaa loo tixgeliyaa tifaftiraha sawirada bilaashka ah maanta, laakiin isticmaalkiisu ma sahlana. Sababtoo ah waxay leedahay qalab aad u tiro badan, astaamo, iyo siyaabo lagu soo bandhigo wax walba, maahan wax sahal ah in la isticmaalo, waxayna kugu qaadan doontaa saacado iyo casharro aad si fiican ugu maamusho.
Dabcan, khubarada laftoodu waxay sheegaan inay ka fiican tahay ama ka fiican tahay Photoshop. Xaqiiqdii, waxay la mid tahay barnaamijkan, laakiin waxaa lagu martiqaaday qaybo kala duwan taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad isku daydo oo aad waxbarto si aad uga faa iideysato.
Qaarkood waxay qabaan fikradda ah in loogu talagalay oo keliya isticmaaleyaasha horumarsan, laakiin maahan. Qalabka ugu aasaasiga ah si fudud ayaa loo barto waxaana loo isticmaali karaa isticmaalayaasha aasaasiga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah, laakiin uma isticmaali doonaan 100% waxa ay bixin karto.
Marka la eego cilladaha, waxay leedahay hal, oo taasi waa inaysan jirin nooc mobilada barnaamijka ah, oo keliya kombuyuutarka.
Ma xasuusataa Windows Rinjiga? Hagaag, tani waa wax lamid ah barnaamijkaas oo aad u adeegsan lahayd cunug ahaan. Waxay raacdaa isla falsafada waxayna noqotay kuwa badan oo tifaftiraha sawirka ugu fiican ee bilaashka ah ee kombuyuutarka.
Waxaa inta badan diiradda lagu saarayaa dadka isticmaala heer aasaasi ah, tan iyo waxay bixisaa aaladaha lagama maarmaanka u ah tafatirka sawirka "aasaasiga ah". Laakiin macnaheedu maaha inay si dhib yar wax u qabanayso. Waxay awood u leedahay inay tafatirto lakabyada, wejiyada, iftiinka, isbarbaryaaca, iwm. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah qalabkeedu waa "xaasidnimada" barnaamijyada kale, sida wareegga 3D / zoom ee dib u soo celiya sawirrada.
Madoobaadka waa mid ka mid ah xulashooyinka loo tixgeliyo tifaftiraha sawirka ugu fiican ee bilaashka ah ee kombuyuutarka. Waana sababta waxay la tartami karaan laba barnaamij oo caan ah oo la bixiyo: Photoshop iyo Lightroom. Haa, waxaan mar kale ku celinaynaa inay lacag la’aan tahay.
Waxay u oggolaaneysaa la shaqeynta faylasha RAW, iyo sidoo kale kuwa ugu waaweyn (JPG, GIF…) waxayna leedahay goobo badan oo lala shaqeeyo. Xaqiiqdii, kuwa isku dayaa way ku wareersan yihiin in qalab uusan wax qiimo ah ku fadhiyin, mana jiraan wax diiwaangelin ah oo loo adeegsado wax kale.
Sawirada Pos Pro
Tifatiraha sawirkani wuxuu inta badan diiradda saarayaa kuwa bilowga ah, laakiin dhab ahaantii qof kastaa wuu u adeegsan karaa iyada oo ay ugu wacan tahay qalabka dib-u-farsameynta ee ay bixiso (markaa magaceeda)
Waxay leedahay laba nooc oo isdhaafsi, laga bilaabo kan ugu fudud ilaa kan sare, halkaasoo aad ka heli doontid qalab casri ah sida tifaftirka lakabka, waji duubista, shaashadda, qaabab iyo haa, waxay kaloo kuu oggolaaneysaa inaad beddelo RAW oo aad la shaqeyso.
Haddii waxa aad doorbideysaa ay yihiin wax ka fudud, markaa isdhexgalka bilowga ayaa ah midka ugu badan ee la muujiyey, maadaama ay lahaan doonto qalab sax ah oo lagu sameeyo waxa aad rabto heer aasaasi ah.
Xaaladdan oo kale dhibaatada kaliya ayaa ah inay leedahay qalab badan, iyada oo loo marayo Sawirada Pos Pro Premium, laakiin kuwani waxay leeyihiin kharash. Waad isku dayi kartaa in muddo ah ka dibna waxaad go'aansan kartaa inaad ku sii socoto nooca bilaashka ah ama aad wax ka beddesho.
Ka soo horjeedka Photoshop, waxay noqon kartaa mid ka mid ah tifaftirayaasha sawirka ugu fiican, maahan kaliya inaad heli doontid ku dhowaad qalab la mid ah barnaamijkii lacag-bixinta ee hore, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay qaadan doontaa boos aad u yar oo ku saabsan darawalnimadaada mana cuni doonto ilo badan sida kuwa kale.
Waxaad ku heli kartaa Windows, MAC, laakiin sidoo kale qalabka mobilada, labadaba Android iyo iOS.
Sida astaamaheeda, waa mid dhameystiran inkasta oo qaabkeeda ugu yar uu "nacas kuu noqon karo marka hore." Waxay leedahay animations kaa caawinaya inaad fahamto barnaamijka iyo sidoo kale casharro inaad ogaato waxa ay tahay inaad sameyso marwalba iyadoo loo eegayo waxaad uga baahantahay sawirka.
Barnaamijyada kale ee loo tixgelinayo inay yihiin tifaftiraha sawir-gacmeedka bilaashka ah ee kombuyuutarka
Haddii barnaamijyadan aysan ku qancin, waa inaad ogaataa inay jiraan fursado kale oo aad tixgelin karto, sida:
Pixlr (qaab ahaan E iyo X).
Sawirka Sawirka X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Tifatiraha sawirada bilaashka ah ee kombiyuutarka